पाथिभरा माताको दर्शन गर्दै आज अशोज २६ गते मंगलबार राशिफल हेर्नुहोस , कस्तो छ तपाइको भाग्य - Like For Nepal
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) मनोरञ्जनको निम्ति धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । श्रम परीश्रमको राम्रो कदर हुने समय रहेको छ । सबारी साधन को प्रयोगमा ध्यान दिनु होला सामान्य झन्झट रहन सक्छ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ । सामान्य कार्य सम्पादनमा अधिक परीश्र गर्नु पर्ने सम्भाबना रहेको छ।
Prevभर्खरै हेर्नुहोस्, सुकुम्बासी बस्तीमा सुकुम्बासी र प्रहरीबीच ड’रलाग्दो झ’डप, प्रहरीले चलायो गो’ली !
Nextअमेरिका जान लागेकी अनिता मृ’त फेला पर्नुको कारण के ? सासु , देवर र नन्दको जबाफ यस्तो